Lacag bixin Agoonsiga-elektroniga Juni Ka soo gal internetka kontadaada. - ppt ladda ner
Lacag bixin Agoonsiga-elektroniga Juni 2013. Ka soo gal internetka kontadaada.
Publicerades avGunilla Persson
En presentation över ämnet: "Lacag bixin Agoonsiga-elektroniga Juni 2013. Ka soo gal internetka kontadaada."— Presentationens avskrift:
1 Lacag bixin Agoonsiga-elektroniga Juni 2013
2 Ka soo gal internetka kontadaada
3 Fur boga swedbank http://www.swedbank.sehttp://www.swedbank.se Riix calaamada Logga in kaa xigta kor dhinaca midigta. Isticmaal doosahaaga (Säkerhetsdosa) Sida adiga laguu aqoonsado.
4 Ku qor personlamberkaga meesha ugu horeysa, kebdib dooro Säkerhetsdosa keddib sii riix mesha ku qoran Fortsätt.
5 Ka bilow doosahaaga adigoo riixaya falaarta oranjiga, kuu qor afarta number ee sirta ah kediib sii riix lamberka 1. Doosahaaga waxaa kaga soo bixidoona 8number oo qarsoon. Ku qor lamberka sirta ah ee kaga muuqda doosahaaga Engångskod, Sii riix kedib meeshas Fortsätt. Skriv engångskoden från säkerhetsdosan
6 Ka gal doosahaaga hadii aad rabtid in aad ka yeelatid lamber shakhsiyeed booga Swedbank. Sii riix mesha ku qorontahay Tillval keddib sii taabo Beställ personlig kod.Waxaad isticmaali kartaa numberka shakhsiyeed marka ka galeeysid internetka bangigaaga. Lamberka sirta ah waa inuu ka koobnaadaa 6 calaamado ugu yaraan 2 lamber iyo ugu yaraan 2 xarfoyin. Lamberka shakhsiyeed waxaad isticmaali kartaa marka aad kala dabareeysid arimahaaga bangiga internetka adigoo aadan isticmaalin doosahaaga. Waxaad ka fiirsan kartaa akaawntiyadaada iyo waxaad amaahatay, kala xawilid akaawntiyadaada iyo adeegsi waraaqahaga muhimka ah. Dhigo doosahaaga iyo kaar bangigaaga meel aad hubtid.
7 Markaad ka bixineeysid akawntigaga kharashyada internetka Riix meshaan Betala/Överföra kadib calaamaday Bg/Pg-betalningar kadib fur.
8 Halkan fur, dooro akawnti oo aad ka bixineeysid. dooro qaate adigoo ka dooranaaya qaateyaashii hore. Markaad qof cusub u direeysid taabo mesha falaarta farta ku heeyso Lägg till ny mottagare (fiiri sawirka ).
9 Warqada gudaheeda waxaad ka heleeysaa wixii warbixin aad uu bahantahay sidii aad u bixin laheeyd kharashaka: Goobta laga bixiyo (bankgiro, plusgiro), Numberka qaate, Lacagta, OCR numberka, iyo taarikhda ugu danbeyso aad bixin kartid. Goobta laga bixiyo Bankgiro, plusgiro OCR Lacagta Lambarka qaate
10 Hadii aadan ku qorin wagtiga lacagta xawileeysid weey dirmeysaa lacagta OCR, waxey ku qorantahay hoos dhinaca bidixda Waad ka boodi kartaa hadii aadan ku qorin fariin. Ku qor lammberka qaate, ka fiiri warqada kharashka dhinaca midigta hoos Markaad riixdid soosaar lamberka qaate, Hadii aadan ku qorin waqtiga kharashka aad bixineeysid wey dirmeysaa isla markaas ama maalinta ku xigta uu bankiga furanyahay (Ama markaad ogolaatid ka hor waqtigan 10:00). Hadii aad dooratid taarikhda kharashka aad bixineysid waqtigaas ayey dirmeysaa.  Kuu qor kharashaka, Lacagta, Taarikhda, OCR ama Fariin kadib sii riix meshan Lägg till.
11 Halkan riix Till godkänna uu caddeysid Taarikhda, qaate iyo Lacagta.
12  Fiiri qoraalkan wada hadalka muuqda. Shid doosahaaga adigoo riixaya falaarta oranjiga ah, ku qor afartada lamber ee sirta kuu ah dabadeedna sii riix lamberka 2. ku qor lamberada shaashada kaga muuqda goobta 1aad. Ku qor doosahaaga lamberada kuu muuqda, sida lamberadan tusaale kuu ah 00000500. Kadib doosahaaga waxaa kaga soo bixidoona 8 lamber oo lagaa rabo in aad ku qortid goobta 2aad. Hadana ku qor lamberka jawaabta oo ku soo baxay goobta 2aad.Dabadeedna riix halan godkänn. Ku qor lamberada kuu muuqda doosahaaga. Lamberada kaga muuqda doosahaaga (8 lamber) waa ku qoreysaa goobta banaan.
13 Geeska wada halaka ugu danbeeya. Hadii aad rabtid in aad soo saaratid riix halkan (Skriv ut) Markaad dhameysatid oo aad rabtid in aad ka baxdid riix halkan (Logga ut) geeska kor dhinaca midigta kaa xiga.
14 Kuu xiriiri karkaaga Visa/MasterCard/lamber sir ah Sidaad uga adeegsan kartid uguna bixin kartid Internetka Waa qasab in uu ku xirnaadaa banki karkaaga. Waa in aad isku caddeysid lamberka sirta kuu ah. Hadii aad rabtid in aad ku xiriirisid macluumadkan karkaga waa in uu kuu furanyahay internet bankiga iyo oo aad leedahay dooso adiga kuu gaar ah. Salaantaada waa in ey ka kobanataa 10 eray ilaa 30 calaamad. eray sir kuu ah waa in uu ka kobnaadaa sideed (8) ilaa shan iyo toban (15) calaamad, ugu yaran labo (2) lamber iyo labo (2) xarfadood.
15 e-legitimation http://www.e-legitimation.se
16 Ku qor 8 lamberka laguu calaamadeeyey doosahaaga. Waxaa kuu soo bixidoona 8 lamber cusub oo aad ku qoreysid goobta 2aad.
Ladda ner ppt "Lacag bixin Agoonsiga-elektroniga Juni 2013. Ka soo gal internetka kontadaada."
Övergång från Apodos till Pascal 11 juni 2012
Så här ser det ut för användaren när priset ska räknas fram.
Golfterminalen 2010 Golfterminalen 2010.
Handelsbankens Internet- och Mobiltjänster. PUWE Övrigt (t ex utanför.se) MOBI.